I-Polkadot (i-DOT) iyancipha, ijongene noKwaliwa kwi-$ 38 yokumelana
Polkadot's (DOT) ixabisoI-e ikwintshukumo ezantsi njengoko i-altcoin iyancipha ukuya kwindawo ethengisiweyo yemarike. Njengoko i-altcoin yawa phantsi kwe-32 yeedola, iinkunzi zenkomo zathenga iidiphu. Ukulungiswa okuphezulu kupheliswe kwindawo ephezulu ye-38 yeedola. I-DOT / i-USD ngoku isilungiso esisezantsi njengoko ixabiso liguquguquka phakathi kwe-$ 32 kunye ne-$ 38. Ixabiso le-DOT liza kuphinda liqhubele phezulu ukuba ixabiso liyaphuka ngaphezulu kwe-38 yeedola eziphezulu okanye ngaphezulu kwemiyinge ehambayo. Ngakolunye uhlangothi, uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqale, ukuba ixabiso liyancipha ngaphantsi kwe-$ 32 inkxaso.
I-cryptocurrency ikwinqanaba le-41 yexesha le-Relative Strength Index 14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Iyawa ngelixa ithengisa kwindawo ye-downtrend. Imivalo yexabiso ye-crypto ingaphantsi komndilili ohambayo obonisa ukunyuka okuthe kratya.
IPolkadot ifikelele ekudinweni kwe-bearish njengoko iguquguquka phakathi kwe-32 yeedola kunye ne-38 yeedola. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwa kodwa lihlehliselwe kwinqanaba le-1.272 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 32.50.
I-crypto ingaphezulu kwe-30% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla ebonisa ukunyuka kwe-bullish. I-altcoin ine-bearish crossover. Oko kukuthi, i-SMA yeentsuku ze-21 iwela ngaphantsi kwe-50-day SMA ebonisa uphawu lokuthengisa.
I-Polkadot's (DOT) iye yaphinda yanyuka ngaphezu kwenkxaso ye-$ 32.50. Ikhandlela libonisa umsila omde obhekiselele kwinkxaso yangoku. Umsila omde ubonisa ukuba inkxaso yangoku yingcinezelo yokuthenga enamandla. Ngaphandle koko, imarike iwile ngaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla.